Umlando weNdebe ye-Ryder: Umvelaphi kunye nophuhliso lweeMatshana
Umlando weNdebe yeRyder
Imvelaphi, amaFomathi, amaQembu kunye noPhuphiswano lweNdebe ye-Ryder
I- Cup ye- Ryder "yasemthethweni" yazalwa ngowe-1927 njengomncintiswano we-biennial phakathi kwabadlali begalufu abaqeqeshelwa i-United States ne-Great Britain.
Ukhuphiswano luye lwaqhutywa minyaka yonke emibini ukususela (ngaphandle kwe-2001, ngenxa yokuhlaselwa kwamagorha e-US, kunye no-1937-47 ngenxa yeMfazwe Yehlabathi II), kunye nemidlalo emine kunye neye-single match play inxalenye yokhuphiswano ukususela ekuqaleni.
Iifom kunye namaqela atshintshile ngeminyaka, kwaye ngokunjalo unqanaba lokhuphiswano.
Imvelaphi yeNdebe yeRyder
Ngoxa i-Cup ye-Ryder ifanisa ngokusemthethweni ngowe-1927, ukukhuphisana okungaqhelekanga phakathi kwamaqela aseGrithani naseBrithani abuyele kwiminyaka embalwa ngaphambili.
Ngowe-1921, amaqela aseGrithani naseMelika aseGrafine adlala umdlalo weMigeneagles eScotland, ngaphambi kweBritish Open eSt. Andrews . Iqela laseBrithani liphumelele, 9-3. Ngomnyaka olandelayo, ngo-1922, wawunyaka wokuqala wokuncintisana kwiNdebe ye- Walker , isiganeko esilungisa ama-American ne-British amateurs kumncintiswano wokudlala.
Ngomdlalo we-Walker Cup owasekelwe kubadlali begalufu be-golf, intetho iphendukele kwisikhwama somcimbi ofanayo olwaphantsi kootitshala. Umbiko wephephandaba laseLondon ukususela ngo-1925 ukhankanywe ukuba uSamuel Ryder wayecebise ukhuphiswano lwaminyaka yonke phakathi kootitshala baseBrithani nabaseMerika. I-Ryder yayiyi-golfer ekhuselekileyo kunye nabamashishini abenzile inzuzo yakhe ngokuthengisa imbewu - ngumntu oye wenyuka ngcamango yokuthengisa imbewu ehlanganiswe kwiimvulophu ezincinci.
Ngomnyaka olandelayo, loo mbono yayibambe. Enye ingxelo yephephandaba laseLondon, lo ngowama-1926, ibike ukuba uRyder wayithumelele i-trophy kwi-competition-yintoni eyenzekayo yi-Ryder Cup ngokwayo.
Iqela labagadi begalufu baseMerika lafika iiveki ezimbalwa ekuqaleni kowe-1926 eBritish Open ukuze udlale iqela laseBrithani eWentworth.
U-Ted Ray wathabatha amaBritoni kunye noWalter Hagen baseMerika. IGrithani enkulu yawuthola umdlalo ngamanqaku angama-13 ukuya kweyoku-1, ngomdlalo omnye.
Elinye lamalungu aloo nqela laseBrithani le-1926, u-Abe Mitchell, yi-golfer efana nomfanekiso wayo uhlobisa i- trophy ye-Ryder Cup .
Kodwa iNdebe ye-Ryder yayingeniswe ngokulandelelana emva kwemidlalo ye-1926. I-trophy mhlawumbi yayingazange ilungele ngolu nqaku, nangona kunjalo, ngo-1926 imikhosi yakhawuleza yafunyanwa "engafanelekanga." Isizathu kukuba uninzi lwabadlali kwiqela laseMelika abazange bazalwe ngamazwe aseMelika, ngokugqithiseleyo uTommy Armor , uJim Barnes noFred McLeod (indlela iqela eliqukethe uHagen, iArms, iBares noMcLeod lingabanjelwa ngu-13-1 -1 amanqaku imfihlakalo).
Emva kokugqitywa komdlalo, iinqununu zamagosa kunye no-Ryder badibana kwaye bazimisele ukuba amalungu eqela kuya kuba kufuneka azalwe ngokuzalwa (oku kwatshintshwa emva kokuba abe ngummi), kwaye loo midlalo iya kubakho yonke iminyaka.
Kodwa umdlalo wokuqala "osemthethweni" uhlelwe unyaka omnye ke, ngowe-1927, udlalwa kwiWorcester Country Club eWorcester, iMisa.
NgoJuni ka-1927, iqela laseBrithani laya e-US Kwakuye kuthunyelwa ukuba i-trophy ye-Ryder Cup ibonakale kuqala.
Iqela laseBrithani lahamba ngomkhumbi waseSouthampton ngaphakathi kwinqanawa yase- Aquitania . Uhambo lwe-transoceanic lwathatha iintsuku ezintandathu. Iindleko zokuhamba kweqela leBrithani zifakwe kwinxalenye ngeminikelo evela kubafundi beGrithani yeGolf Illustrated .
URay noHagen baphinde bafumana amaqela, kwaye ngeli xesha iqela ngalinye liqulethwe ngabadlali abazalwayo kuphela. Kwaye ngeli xesha, iqela le-USA liphumelele, li-9 1/2 ukuya ku-2 1/2. Inkomfa ye-Ryder yanikezelwa kwiqela laseMerika, kwaye ukhuphiswano lokuqala lwe-Ryder Cup olusemthethweni lusezincwadini.
Okulandelayo: Indlela Ifomathi Eye Yatshintsha Ngayo Iminyaka
Imidlalo - ifomathi yabo kunye nobude bexesha - edlalwa kwiNdebe ye- Ryder yatshintshile ngaphezu kweminyaka, iguqukela ukucwangciswa kwangoku: ezine ibhola kunye nemigqomo emine kwiintsuku ezimbini zokuqala, ilandelwa yimidlalo ye-singles ngosuku lwesithathu, yonke imingxuma eyi-18 ubude.
Nantsi ingqungquthela yendlela amafomathi omdlalo atshintshile ngayo iminyaka.
Umncintiswano wokuqala we-Cup ye-Ryder uqukethe amaqela amane (abadlali ababini ngecala, bedlala ibhola elithile ) kunye neemidlalo ezingabonakaliyo.
Yonke imingxuma yayingama-36 emigodini ubude. Imidlalo emine emine yayidlalwe ngosuku lokuqala, ilandelwa yimibhozo yesibhozo emine ngosuku lwesibini.
Le fomethi, kunye neengongoma ezili-12 ezijongene nazo, zahlala kwindawo yokhuseleko ukuya ngo-1961.
Umncintiswano we-Ryder Cup wanda kwenyuka ukusuka kuma-12 ukuya kuma-24 amanqaku ekubanjeni ngokusika imigqomo ukusuka kwimingxuma engama-36 ubude ukuya kwi-18. Iinesomes kunye nee-singles zisekho ifomathi ezisetyenzisiweyo, kwaye ukhuphiswano lwahlala iintsuku ezimbini ubude.
Kodwa ngoku, kukho imijikelezo emibini yamabini amane ngosuku lokuqala, ezine zidibanisa nganye ngentsasa nasemini. Ngomhla wesibini, iimidlalo eziyi-16 zeemidlalo zedlalwe, ezisibhozo ekuseni kwaye zintsimbi ezisibhozo ngemini (abadlali babefanelekile ukudlala kwimimiselo ye-singles nasemini).
Ukongezwa kwamacandelo angaphezulu kwama-12 kuphakanyiswe nguNkosi Brabazon, umongameli we-Professional Golfers Association of Great Britain. Inkqubo yokwamkela isiphakamiso yayiya kubangela olunye utshintsho kwiNdebe ye-Ryder, le ...
Isiphakamiso seNkosi Brabazon ngo-1960 ukwenzela ukwandisa amaphuzu athatywayo ukususela kwi-12 ukuya kwe-24 kubangele ukuba kusetyenziswe ikomiti yabadlali ukuba bafunde umba. Baye bavuma, kwaye iimidlalo zika-1961 zaphindwa kabini kwiingongoma, kodwa zagcina uhlobo olufanayo lweemidlalo (ezine ezineziganeko kunye nezingqungquthela) kwaye zahlala iintsuku ezimbini kwixesha.
Ikomiti yabadlali, nangona kunjalo, iphakanyisile ukuba ifake ifomathi entsha kwiNdebe ye-Ryder: ezineballballs. Ii-Fourballs zibandakanya abadlali ababini kwicala elidlala ibhola elona liphezulu (amanqaku aphezulu kubalo babini njengeqela leqela).
Iineballball zaqala ukudlalwa kwiNdebe ye-Ryder ye-1963, kwaye i-'63 Cup yowokuqala edlalwa ngaphezu kweentsuku ezintathu. Umhla woku-1 wawuneemibhozo ezisibhozo ezineenkomfa ezine (emine ekuseni, ezine ngemini), umhla wesi-2 wesibhozo ezine (iintsuku ezine ekuseni, ezine emini) kunye noMhla wesi-3 we-16 kwiintlobo zeemidlalo (ezisibhozo ekuseni, ezisibhozo ngemini). Abadlali banokudlala kwimimandla engama-ntambama nangemuva xa abaphathi babo befuna.
Iingongoma ezithintekayo zinyuka ukuya kwi-32.
Ngethuba lokuqala, ama-foursomes kunye ne-fourballs adibene. Ngaphambili, zonke iimine zomdlalo zadlalwa ngosuku olunye, kunye nawo onke amabhola amane. Ngowe-1973, emine ibhola emine kunye nemine emine ibhola yayidlalwe nganye kwiintsuku ezimbini zokuqala.
Ekukhuthazeni iqela laseBrithani, ukuncintisana kwe-Ryder Cup kwancitshiswa ngobukhulu ngowe-1977. Kwakukho iingongoma ezingama-20 ngoku, ngaphandle kwe-32.
Oku kwaba yimiphumo yokudlala kuphela ezine ezinezine kunye nezine ezineebhola ezipheleleyo, kunokuba zine ezine nganye ngosuku ngosuku lweentsuku ezimbini zokuqala. Umhla woku-1 wabonisa umdlalo wezine, i-Day 2 amabhola amane kunye ne-Day 3.
Iingoma ze-Singles zancitshiswa. Ngaphambili, bekukho iimidlalo eziyi-16 ezilinganayo, ezisibhozo zidlalwa ekuseni, ezisibhozo ngemini, kunye nomdlali ofanelekileyo ukuba adlale ngentsasa kunye neyeemva.
Ifomathi entsha ebizwa ngokuba yimidlalo eyi-10 yee-single matches, idlalwe ngokulandelelana ukuze umdlali angadlala umdlalo omnye kuphela.
Ifomathi yokhuphiswano yatshintshwa kwakhona kulo nyaka. Ujikelezo lwesibini lwama-foursomes kunye ne-ezineballball longezwe kwiNdebe ye-Ryder (kangangokuba iidlali ezine ezisibhozo kunye nebhozo ezisibhozo zidlalwa, zizonke, zahlula iintsuku ezimbini).
Amaphuzu athatywayo avela ku-20 ukuya ku-28. Imingcele ye-Singles yabuyela kwifomathi yamasa / ntambama, kodwa abadlali babedlala ngokudlala umdlalo omnye. Umdlalo wee-12 zeemidlalo ezihlukeneyo zadlalwa.
Ixabiso elipheleleyo lihlala lifana (28), ngokutshintsha nje ukutshintsha.
Kunokuba ifomati yasasa / ntambama, zonke iimidlalo zemibala zadlalwa ngokulandelelana.
Yaye yile ifomathi esetyenziswayo namhlanje: Umcimbi weentsuku ezi-3 ezine ezine ezine-amane kunye nezine ezineebhola ezine kwiintsuku zombini 1 no-2, kunye nemidlalo engama-12 engumhla ngomhla we-3.
Okulandelayo: Amaqela atshintshe njani ngeminyaka
Kuye kubekho utshintsho olwenziwe kumalungu eqela elibandakanyeka kwiNdebe ye- Ryder , enye encinci kunye nokutshintsha kwe-continental ngempela.
Ukususela ekuqaleni kowe-Ryder Cup ngowe-1927 ukuya kutsho ngo-1971, ukhuphiswano lwe-Ryder Cup lwalunxweme eMelika kumelene neBritain.
Ngowe-1973, i-Ireland yongezwa kwiBritani ukwenza igama elitsha leqela: Great Britain kunye ne-Ireland, okanye i-GB & I. Sitsho ukuthi yakha igama leqela elitsha kuba ngokwenene kuphela igama leqela liguqukile.
Inyaniso kukuba, abagadi begalufu base-Ireland - bobabini abasuka eNyakatho ye-Ireland naseRiphabhlikhi yase-Ireland-bebedlala kwiqela elikhulu laseBrithani ukususela ngo-1947 i-Ryder Cup. Olu tshintsho lwaluqaphela kuphela loo nto.
Ngoko igama elithi "Great Britain & Ireland" lalisetyenziselwa kwi-Ryder Cups ezintathu, ngo-1973, 1975 no-1977.
UJack Nicklaus uncedise ukunyamezela umzamo wokutshintsha ngokuqinisekileyo iqela leqhinga kunye nokuzisa ukhuphiswano olungakumbi kwi-Cup ye-Ryder. Ukulandela imikhosi ka-1977, i-PGA yaseMelika kunye ne-PGA yaseBrithani enkulu yadibana ukuxoxa ngeendlela zokwandisa ukhuphiswano. Ngelixa umbono wokuvula i-Great Britain ibambelele kubadlali abavela kwiYurophu engazange ivela kuNicklaus, ukugxotha kwakhe kwi-PGA yaseBrithani kunye nokubambelela ngcamango kunceda ukuba kwenzeke.
Ii-PGA ezimbini zavuma ukuvula umdlalo kulo lonke elaseYurophu kwaye zazisa ukuba i-1979 yayiya kunyaka wokuqala apho i-Ryder Cup yayiza kubetha khona i-United States ngeYurophu.
Kwakuyi-shift continental ngandlela-thile: ngokukhawuleza umdlalo wawuba nokukhuphisana kwaye lukhuni kwaye inomdla ukusuka kwiphondo ephakamileyo.
Xa iqela laseYurophu liphumelele ukulingana (ngaphakathi kweminyaka elishumi yenguqu), i-Ryder Cup yabonakala njengenye yeemeko ezithandwa kakhulu kwizemidlalo kwihlabathi.
Okulandelayo: US Ulawula Iminyaka Ephakathi
(Qaphela: iziphumo zonyaka - kunye nemiphumo yokufanelana nemigangatho yokhuphiswano ngamnye - inokufumaneka kwikhasi lethu leZiphumo ze-Cup ye-Ryder .)
Xa iqela laseBrithani liphuma kwiinqanawa zase- Aquitania emva kohambo lweentsuku ezingama-6 ngowe-1927, abadlali balo baya eWorcester Country Club eWorcester, iMisa., Kwi- Cup yaseburhulumenteni yokuqala .
I-US, egcinwe nguWalter Hagen kunye neGene Sarazen , iLeyo Diegel, uBill Mehlhorn kunye noJim Turnesa, "iWild", banqotshwa iBrits, 9.5 ukuya ku-2.5.
Amaqela athengisa ukunqoba kwimincintiswano emine yokuqala ye-Ryder Cup, iBrithani iphumelela ngo-1929 no-1933 imincintiswano eNgilani, kwaye i-US ithatha iziganeko ze-1927 no-1931.
Imidlalo ye-1929 e-Moortown Golf Club eLeeds, eNgilani, yabonwa ngokuba yinkcitho: I-R & A, ibhunga elilawulayo legalufa e-Great Britain, aliyi kuvuma iiklabhu ezenziwe nge-steel-shafted kude kube ngo-1930, ngoko ke yonke imidlalwayo yayifuneka idlalwe nge-hickory iiklabhu ezitshintshileyo. UHorton Smith , oya kuqhuba ukuphumelela iMaster , wayengakaze adlale amaqela e-hickory. Oku akuzange kumvimbele ekuphumeleleni umdlalo wakhe wokudlala, 4 no-2.
UHagen wabamba amaqela amathandathu okuqala aseMelika - yonke iikhompu ze-World War II.
Imidlalo ye-1933 ibhalwe mhlawumbi inkulu yeentloko zabaphathi. UHaren, ke, wayekhokela amaMerika, kunye noJH Taylor , inxalenye yeBritani "eyona nto inokuthi" i- Great Triumvirate , "yahokela iBrits. Iqela likaTylor liphumelele, li-6.5 ukuya ku-5.5, kwakuba kukuthini ukuphumelela kokugqibela kwe-Great Britain iminyaka engama-24.
Emva kokuphumelela kowe-1933, iBritani ayiyi kuphinda iphinde iphumelele kude kube ngowe-1957-kwaye ukuphumelela ngo-1957 kwakuyi-britan eyodwa kuphela ukusuka ngo-1933 ukuya ku-1985. Ukulawulwa ngabantu baseMerika kuyakuqondakala lula xa umntu ekhangelelwa kwamanye amaqela ase-US akwazi ukwenza kule minyaka. Khetha malunga naliphi na unyaka ukususela kuloo xesha kwaye uza kufumana amaqela aseMerika aneembali kunye nabaphumeleleyo bebhola .
Ngokomzekelo, ngo-1951: USam Snead, uBen Hogan, uJimmy Demaret, uJack Burke Jr. kunye noLloyd Mangrum bangamaqela ase-US. Omnye, ngo-1973: UJack Nicklaus, uAnnold Palmer, uLee Trevino, uBilly Casper, uTom Weiskopf kunye noLou Graham bekhokela e-US Lawa ngamaqela ambalwa esiwakhethile ngokungaqhelekanga. Kwaye ama-America awazange ahlale enabo bonke abadlali ababalaseleyo; UJack Nicklaus akazange adlale umdlalo we-Cup ye-Ryder kude kube ngo-1969 ngenxa yomgaqo-ongasasebenzi - ukuba umdlali kufuneka abe ilungu lePGA Tour iminyaka emihlanu ngaphambi kokuba afaneleke kwiqela le-US.
Amaqela aseBrithani neGG & I kweli xesha angakhokelwa ngumdlali omdala, njengoHenry Cotton okanye uTony Jacklin , kodwa i-Brits yayingenaso ubunzulu bokuncintisana ngokulingana. Amanqaku amaninzi abonisa ukubusa kwe-American: 11-1 ngo-1947, 23-9 ngo-1963, 23.5 ukuya ku-8.5 ngo-1967.
Xa ama-US aphumelele, ngo-8-4, ngowe-1937, kwakungowokuqala iqela liphumelele kwi-Cups back-back. I-Cup ye-Ryder ayidlala kwakhona kwaze kwaba ngo-1947 ngenxa yeMfazwe Yehlabathi II, kwaye yayingaphinda idlalwe kwakhona.
Okulandelayo: IQela laseYurophu eliMamge
I- Cup ye- Ryder yayisetyenziselwa ukuqhubeka kwakhona ngo-1947, kodwa i-Great Britain yayisuka kwimpembelelo yeMfazwe Yehlabathi II. I-British PGA yayingenayo imali yokuthumela iqela e-United States.
I-1947 ye-Ryder Cup mhlawumbi yayingayi kudlalwa ukuba umcebisi ocebileyo akazange aqhube phambili. URobert Hudson wayengumlimi ovelisa iziqhamo kunye nomdlali e-Oregon owanikezela ukusebenzisa iqela lakhe, i-Portland Golf Club, kumdlalo, kwaye wahlawula indlela yokuba iqela laseBrithani lihambe.
U-Hudson wada wagijima waya eNew York ukudibana neqela laseBrithani njengoko liphuma kwiinqanawa zeenqwelo zeeNdwendwe zikaMariya , emva koko wathatha uhambo lwabaqeqeshi belizwe lonke ePortland (uhambo oluthabatha iintsuku ezintathu / 1/2).
Isibhedlele saseHalson sasinkulu kunokuba seqela laseMerika, eliye laphazamisa iBrits, 11-1. Kwakuyilahleko eyona nto kumlando we-Ryder Cup - kuphela ukunqotshwa kukaSam King kaHerman Keizer kumdlalo wokugqibela wawungavimbela ukuvalwa.
Kwaye iqela le-1947 lase-US ngokuqinisekileyo lilingqongqo kwiimbali: uBen Hogan, u-Byron Nelson noSam Snead baholele iqela, bajoyine uJimmy Demaret, uLeb Worsham, iHarrison iHarrison, iPorky Oliver, uLloyd Mangrum noKezer.
Umncintiswano we-Ryder Cup awuzange usengozini emva kowe-1947, kodwa ukuqhubela phambili kweqela le-USA kwamboleka isiganeko seminyaka emininzi. Amaqela aseBrithani ahlala efunyanwa ngokwaseMathematika phambi kokuba ama-singles adibanise.
Kodwa ukhuphiswano lwamaxesha onke ludlala, kunye nawo wonke umdlalo ogqityiweyo kwimbonakalo yezemidlalo.
Ukutshatyalaliswa kwedwa eBrithani phakathi kowe-1935 no-1985 kwafika ngowama-1957, xa iqela lilawula i-single singles. UKen Bousfield, umphathi we-Dai Rees, uBernard Hunt no-Christy O'Connor Sr. bonke bawulwa ngamanxweme amakhulu.
Ibhalansi yokukhuphisana kwi-Cup ye-Ryder yaqala ukutshintsha, nangona kunjalo, ngowe-1979, iqela lokuqala leRyder ukufaka iQela Yurophu.
I-US iphumelele i-US-vs-Yuropi ye-Cups kalula, i-17-11 ngo-1979 kunye ne-18.5-9.5 ngo-1981.
Kodwa iqela laseYurophu lalikwamkela abadlali abaza kutshintsha umjelo ngokukhawuleza. Inkomfa yokuqala kaNick Faldo yayingu-1977; Seve Ballesteros udlale kuqala ngo-1979; kwaye uBernhard Langer wenza loo ndawo ngo-1981. Abadlali abathathu, kunye nabaphathi bamlilo abanjengoBernhard Gallacher kunye noTony Jacklin , bancedisa iYurophu ngokukhawuleza ukubeka i-footing efanayo ne-US.
Uthotho lokuqala lwaseYurophu lwafika ngo-1985, kwaye iYurophu iya kuphinda iphumelele ngo-1987, kwaye igcine iNdebe ngo-1989. Phakathi kuka-1985 no-2002, iYurophu yawina amahlanu, ama-US kathathu, kunye neyonto e-'89.
Impumelelo yaseYurophu ayizange ivuselele umdla kuphela kwi-Ryder Cup kwi-Great Britain naseYurophu, kodwa nakwase-US, apho abalandeli be-golf baseMelika beza kuthatha iNkundla ye-Ryder.
Ukukhuphisana, ukulwa nokukhuphisana ngokukhawuleza kuye kwaba ngumphumo, kunye nabalandeli begalufa emhlabeni wonke abaphumeleleyo.
2017 I-Solheim Cup: Ithimba le-USA Iinqwelo zokunqoba kweYurophu
Iirekhodi zabaNcinci abaDala kwiLPGA Tour
1996 Masters: uNorman's Collapse Uphendukela kwiJacket yaseGreen ye-Faldo
I-British Open Tournament
1958 Masters: Arnold Palmer Yaba yi-Superstar
I-LPGA Tour Race kwi-CME Globe Points Chase
Iinkcukacha ezibalulekileyo malunga nokusetyenziswa kakubi kwezilwanyana
Imfazwe Yehlabathi II: Isivumelwano seMunich
Iimpawu eziMkhulu kunye neeNcinci zesiNgesi ngegrama
Iimpawu ezifutshane zeJohn Quincy Adams
Ukunika imiyalelo ngesiFrentshi
I-Champions Dinner kwi-Masters: Yintoni kwiMenyu?
Iinqununu ezi-5 ze-OFAC zokuthobela
I-Golf Backswing Exercise ne-Dumbbell
Ukuvula Amanzi okanye i-Triathlon Training Training Training
Indlela iBhomu eyaxothwa ngayo ngo-1886 iRipoti echaphazelekayo i-American Labor Movement
Indlela yokudala iKharityhulam Yakho
Indlela Yokuphumelela Intliziyo Yowesifazane WaseKapricorn
Iingcali Zezizwe Zichaza Njani Ukusetyenziswa?
9 I-Guitarists Awuzange Ukwazi Ukuba Wayesekhohlo
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uJames McPherson
Iingoma eziyi-100 eziphezulu zePop yase-2008
Ukudlala iCasino Poker
Yintoni i-Falicic Logic?
Amadolophu amakhulu kunazo zonke kwiMbali